Maragga: Sidee ayaan u soo maray baabtiiska Ruuxa Quduuska ah | Apg29
Waxaan xusuustaa ayuu yiri, "by baabtiiskii Ruuxa si aad u hesho awood."
Waxaa cajiib ah in la wada buuxsamay Ruuxa Quduuska ah. Waxaad dareemi Ruuxa sida il in goobooyin in gudaha, il in la barwaaqaysan yahay tamar iyo farxad.
Markii aan ahaa Mu'min ah oo cusub, waxaan booqday kulan ee goobta cibaadaysiga aan ka fogayn tuulada gurigeyga. Golaha ayaa u yeedhay wacdiyi jiray dhallinyaro ah in ay leeyihiin kulamada todobaadka. Waxa uu u ciyaaray qalab muusiik ah, iyagoo gabyaya oo ku wacdiyi jiray. In mid ka mid ah kulamada, wuxuu ka hadlay baabtiiska Ruuxa Quduuska ah. Waxaan xusuustaa ayuu yiri, "by baabtiiskii Ruuxa si aad u hesho awood."
maragga Evangelist ee loogu tala galay in aan rabitaan xoog leh in lagu baabtiiso Ruuxa Quduuska ah. Waxaan u maleeyay: "Power waa uun wixii aan u baahan tahay in ay ka gudbaan aan u degto nicotine."
Markii aan guriga yimid shirka ka dib, ay ahayd gudcur, maxaa yeelay, waxay ahayd bisha October. Goortii xilligii loogu talagalay nasasho habeen ee, waxaan on sariir ee waalidka aan fadhiistay. Waalidka iyo walaalaha ahaayeen qolalka kale, sidaasi darteed waxaan ahaa oo keliya ee jikada. oo daahyada oo aan la pre-banki furmo, laakiin waxaan arki karin baxay habeenkii.
Waxaad la taag darnaan weyn ee aan laabta, waxaan mar kale iyo mar kale u jawaabay - laga yaabee nus-saac: "Gacaliye Ciise, i baabtiisaa Ruuxa Quduuska ah, sidaas darteed waxaan awood u leeyihiin." Waan ku soo eegay samada habeenkii, kaas oo lixdii bilood daruuraha. Si lama filaan ah la wadaago daruuraha, iyo iyada oo dol ah oo daruuraha waxay ahayd nuurka aad u dhalaalaya. Waxa uu ahaa sidaas dhalaalaya oo qurux badan qolka.
Ka dib markii Candlelight ah, waxaan maqlay wadna xanuunka, kaas oo si tartiib tartiib ah kor u kacay ilaa ay ka dhawaajisay sida duufaan oo culus.
Inkasta oo sanqadha duufaanka ahaa isxigxiga oo xoog badan oo xoog jidhkayga dhex, madax ilaa cagaha. Ruuxa Quduuska ah oo hanti qaaday aniga iyo waxaan dareemay sida cadaadiska xabadka. Waxaan ahaa mid aad u cabsan oo waayo aragnimo ah ee awoodda badan. Uma maleynayo Waxaan cabsanaayay in aan nolosha.
Laakiin waxa ay noqon doontaa markii Ilaah yimaado dhow. Hortiisa quduuska ah in aad adigu u baqeen. Laakiin muddo ka dib, ka cabsada oo aan waxaa ka buuxsamay nabad la yaab leh. Waxaan ahaa ma ka dibna in afaf lagu hadlo, laakiin waxa markii dambe yimid.